Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: samy vonona avokoa | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: samy vonona avokoa
Na eo aza ireo mpilatsaka hofidiana izay mitaky ny hanemorana ny fotoam-pifidianana noho ny fahitany ny tsy fahatomombanan’ny lisitry ny mpifidy, dia tapitra mifaninana ireo 36 mianadahy amin’ny fanambarana fahavononan’ny tsirairay hiatrika ny fanarenana ny tanindrazana.
Ny mpifidy moa dia mizarazara na samy vonona avokoa aza. Ao ireo milaza fa tapa-kevitra ary vonona hiatrika ny adidy raha tsy handatsa-bato, andanin’izany ny olona efa tsindrian-daona hitsara ny tsy mety ataon’izay efa teo. Ary ny sasany kosa dia tena hisafidy ilay tokana heveriny fa afaka hitarika ny vahoaka hivoaka ity haizina namarinana azy.
Tsy misy fandikan-dalàna izany. Malalaka ny fandehanana mifidy na tsia. Malalaka ihany koa ny safidy eo am-pandatsaham-bato. Samy manana ny fijeriny ny tena fisian’ny adidy noho ny maha olom-pirenena ny tena ihany koa. Matoa ny lalàna tsy nametraka fanerena ary tsy nanao ho heloka ny tsy fifidianana, dia navelany ho anisan’ny safidy ny tsy fandehanana mandatsa-bato. Na izany aza, hafahafa kokoa ny fandraisana ny tsy fandehanana mifidy raha ampitahaina amin’ny fandatsahana vato fotsy sy vato tsy manan-kery.
Fomba telo mitory tsy fankatoavana izy ireo. Ny voalohany dia milaza ny tsy fandraisany anjara tsotra izao, ny roa hafa dia fanehoana ny tsy fisian’ny mpilatsaka azony ametrahana fitokisana.
Hafahafa ihany koa ny fomba fampidirana ny isan’ireo tsy nifidy eo amin’ny tarehimarika manambara ny vokatry ny fifidianana. Ny tsy fandehanana mifidy dia atao vesatra manamaivana ny taha-pahavitrihana. Izany hoe raha adika an-tendrony fotsiny, ny isan’ny olona tsy nifidy dia natao ho isan’ny olona tsy navitrika.
Eo angamba no misy olana kely. Mety misy olona tena mampiseho fahavitrihana eo amin’ny tsy fandehanany mandatsa-bato. Sarotra ny hanao safobe mantsina ka hamaky mifanipaka azy amin’ny taha-pavitrihana, amin’ny filazana hoe taham-pahakamona. Mety hisy ny olona tsy ampy fahazotona amin’izy ireny, fa misy koa ny maneho ny tsy fankatoavany ilay fifidianana na ny fitsipahany ny fomba anaovana azy. Fanehoan-kevitra pôlitika izany ka zo feno, tsy mendrika homavomavoina. Mitovitovy amin’izay ny fahalalahan’ireo mpilatsaka mitaky ny fanajana ny fenitra sy fepetra rehetra mifehy ny tontolon’ny fifidianana.
Zo ary adidy mihitsy ny fitakina izany, fa ny fomba fanaovana ny fitakiana no mety misy azo kianina. Rehefa mibaribary ny tsy fanajana ny fepetra. Ampy angamba izay ahafahan’ny firaisa-monina mamaritra ny toe-tsain’ny mpitsara mikasika ny fiarovan’izy ireo izany hoe lalàna sy rariny.